Zvokudya Delicious articles
Paunenge uchigadzira hove yakakangwa, chinhu chikuru ndechokuita kuti unyorove hwemapfupa ose uchengetedze kutendeseka kwezvikamu zvepakutanga. Zvadaro, tichakuudza kuti ungaita sei hove yakakangwa mumagungwa ehove pamba uye kupa mafura maviri anonaka.
Nehove yekakani mujinga rehove rehove
hove kwete rwizi rukuru (crucii carp, chikafu, bream) - 1,9 kg;
mafuta ezuva-soro asina kuvhenganiswa nemuchero - 125 ml;
mvura yakachena - 245 ml;
eion bulbs - 190 g;
karoti - 190 g;
ibwe harisi idizedhi munyu - kuravira;
granulated shuga - 15 g;
apple vhiniga - 10 ml;
pepper inotapira uye yakasviba - mazai 7-9;
buds of carnation - 2-3 zvidimbu;
bay mashizha - 2 pcs;;
Mafuta emafuta akacheneswa okudururirwa mumakani.
Hove yakakonzerwa kubva kune rwizi kumba ndiyo inonyanya kukosha kubika mune imwe nyanzvi kupfuura isu iye zvino uye kuda. Zvose zvinooneka uye zvisingaonekwi mapfupa, ayo ane zvakawanda zvehove dzehova, dzinonongedzwa mumutambo wekunyorova uye haatombofungi mundiro yakagadzirwa.
Saka, kutanga nehove, hove inofanira kunyatsogadzirirwa. Tinozvichenesa, kubvisa zvinyorwa, uyewo kubvisa musoro, muswe nemafuta.
Chikamu chinosara chechitunha, chakashambidzwa, chikagurwa kuita zvikamu zviduku uye zvakasarudzwa pamucheto wechipfuva.
Iye zvino tinosuka uye tinotarisa makaroti uye tigozviparadzira pane hove dzinobva kumusoro.
Zvadaro tora onions. Isu tinosuka misoro, tinoputira hafu yezvindori uye tinovatumira kune multivarka kune karoti.
Nokuda kwemupunyu, kupisa mvura shoma, kuputsa tomato kuisa mairi, wedzera mafuta emiriwo, munyu, shuga uye vhiniga, shandisawo pea pepper inonhuhwirira uye yakasviba, mazai evhaves uye mabhasi.
Zadzai musanganiswa nehove mu multivark, yevhara chiridzwa chine chifukidziro uye uchisiye iyo yekubika kwemaawa matanhatu, uchiisa chigadziro che "Kuchenesa" mamiriro.
Mushure mekupera kwemazuva, hove yakagadzirwa nemakwenzi yakabva pamhenderekedzo yerwizi mu multivark ichagadzirira.
Iwe unogona kuzviisa muhuni inopisa pamiti yakaoma uye yakaoma, udira mafuta akabikwa pamusoro pemiriwo kusvika kumusoro, kufukidza nemabhandi uye mushure mokunge uchitonhorera, uende kumapfufisi efiriji yekuchengetedza.
Nhamba yakakonzerwa kubva kune rwizi mumhepo inopisa
anyanisi uye karoti - 1 kg rimwe nerimwe;
pepper inonhuhwirira uye pasi dema - kuravira;
Yakagadzirirwa uye yakatemerwa muchikamu chehove yehove yakarungwa uye pashure pemaminitsi gumi nemashanu tinopisa mumvura kwemaminitsi gumi nemashanu.
Tinorara zvakakwana hove dziri hafu-litita zvirongo, tichienzanisa nemhete eonikisi uye garoti makaroti uye kunwa nepirepi kuti tate.
Tinovhara (zvisina kufanira) makani ane mabhedi, eiisa pane grill yemhepo inopisa uye inodururira mvura inotonhora kuitira kuti inosvika pane zvigadziro pamapfudzi.
Sterilize mitsara mukutanga kwehafu yeawa, zvino bvisa moto, kumirira kusvikira inenge ichiuya, uye uwedzere kune imwe imwe yega chirishi chepaspuni yemunyu, kikapu chemafuta e-sunflower uye sunga mavhiri.
Tinoisa workpiece mukumanikidzika mupfuri kweawa imwe, zvino bvisa kupisa uye kusiya chigadzirwa kuti utonhorere kwemaawa makumi maviri nemana. Izvo chete mushure meizvi, tinonyatsotora midziyo yemakinheni uye tinoiona kuti inochengeterwa munzvimbo inotonhorera.
Saladi neyo tsvina squid
Nzira yekubika rassolnik nemupunga?
Vinaigrette - 8 zvinonaka mapeji emunharaunda wako waunoda
Champignons ne cheese muvheni
Saladi nekateji nemaseseji
Nyama kuzadza mapepa
Saladi newaini yakabikwa
Inofadza sei kubika mackerel muchoto?
Kombucha - sei kutarisira uye kushandisa nekuvandudza hutano uye kunaka?
MuLondon, nyika yekutanga ye "Bridget Jones 3"
Ndingafudza amai vangu here?
Kurapa kwehutachiona hwehutachiona hwehutachiona mukudzivirira
Mafuta akaomeswa nekottage cheese
Green coffee: expert review
Chikamu pamusoro wemwana mwedzi mitatu
Mifananidzo iri mukatikati
Tambanudza chifukidzo muimba
Muongorori Ryan Phillippe akapa hurukuro inonakidza yeVasikana's Health magazini
Mononucleosis - rudzi rwechirwere chei?
Chivigiro chakavharwa kumakati
Nei mwana achidzokazve?
17 nzvimbo dzinoshamisa kuLos Angeles
Zvokudya "Zvaunoda" - menyu kwemazuva 14
Victoria Lopyreva's makeup
Tetet beet - sei yekudzivirira kukanganisa mukukura?
Manheru anozvigadzira muchiGiriki